पाण्डेकाे ओलीलाई खुल्लापत्र : फरक भाषण हाेइन, काम गर्नुस् !
माननीय केपी शर्मा ओली ज्यू,
नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं।
माननीय केपी शर्मा ओली ज्यू म एक युवा हुँ र मैले म जस्ता हजारौं नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गर्दछु। अहिले नेपाली युवाहरू लामबद्ध भएर राहदानी लिन अध्यागमन विभागको कार्यलय अगाडि उभिएको त यहाँले पक्कै देख्नु भएकै होला। तपाइँको विगत र सम्भावित भविष्यबारे म जस्ता हजारौं युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो पत्र लेख्ने चेस्टा गरेकोछु।
नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्याकालको समेत शुभकामना। आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद निकै सक्रीय एवं चाखलाग्दो राजनीतिक गतिविधमा संलग्न भएको देख्दा तपाइँ निश्चय पनि तीब्र इच्छाशक्ति र अथाह सम्भावना भएको नेता हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन। दुई-दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर पनि सहज र सरल रुपले देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेर आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आउनुभएको छ । आफ्नो फरक किसिमको वाक् क्षमता एवं मन्तव्यले विगत केही बर्ष यता राष्ट्रिय राजनीतिको शिखरमा रहनु भएको छ। यहाँको स्वास्थ्य सदैव अनुकुल रहोस् शुभकामना छ।
कम्रेड, चितवनमा सम्पन्न यहाँको पार्टीको दसौं महाधिवेशन उपर अहिले देशीविदेशी सबैको चासो र जिज्ञासा छ। यस महाधिवेशनबाट तपाइँ अझ शक्तिशाली अध्यक्ष भएर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्नु भएको छ। विगतमा देशको सार्वभौमसत्ता, जनताको स्वतन्त्रता, अत्याचार र दमनका विरुद्ध पटकपटक संघर्षको मैदानमा होमिएर जेल र नेल भोगेको, अनेक दुख कष्ट, अभाव र व्यवधानहरुको सामना गर्दै आफ्नो निजी जीवनको तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र र जनताका निम्ति त्याग गरेको यहाँको गर्विलो इतिहास नेपाल देशले सदैव सम्झिरहने छ।
अबको पाँच वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै गर्दा आफ्नो विगतलाई स्मरण गर्दै पूर्णतः राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। त्यसो त तपाइँले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको र प्रष्ट राष्ट्रिय अडान लिएर लोकप्रिय बन्नु भएको थियो। त्यसपछि सर्वत्र हाईहाई हुनुभएपछि नेकपा माओवादीसँगको पार्टी एकता गरेर एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको यहाँको अभियान उत्तिकै स्वागतयोग्य थियो। तत्पश्चात् तपाइँले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले दुईतिहाई मतले सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो र तपाइँ उक्त ऐतिहासिक सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तपाइँको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वको प्रारम्भमा देशमा आशाका किरणहरु पनि देखापरे तर त्यो फगत क्षणिक रह्यो। तपाइँ प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका केही निर्णय निकै विवादित र तीव्र आलोचनाका सिकार बने। नागरिकता विधेयक, गुठी विधेयक, संचार माध्यम सम्बन्धि विधेयक लगायत कानुन निर्माणमा तपाईंको उचित ध्यान नगएपछी तपाईं पछि हट्नुपर्यो।
पटकपटक यहाँले भन्दै आउनुभएको शुन्य सहनशीलता सम्बन्धि नारामा पनि ७० करोड प्रकरण एवं ओम्नी, यति लगायत खोप ल्याउँदा भएको अनियमितताबारे उठेका प्रश्नहरुले तपाइँको ब्यक्तित्व र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई तहसनहस नै बनायो। कोरोना कालमा तपाइँले देखाउनु भएको भूमिकालाई लिएर देशविदेशमा राम्रै आलोचना भयो। पार्टीका सामान्य बैठकदेखि अनावश्यक छलफलसम्म बालुवाटारमा राखेर चिया तथा खाजा खर्चको बिल करोडौंमा आएपछि अझ धेरै आलोचनाका आवाजहरु उठे। अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी आफूअनुकुल नियुक्ति गरेको जस्ता विषयहरू अझ धेरै आलोचित बने।
यी सबैका बाबजुद पनि नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालका मिचिएका भूमि लिपुलेक, लिम्प्याधुरा र कालापानी समेटेर संविधान संशोधन गरि देशलाई यहाँले ठूलो गुन लगाउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर चीनसँग पारवाहन सन्धी गरि देशको एकपक्षीय परनिर्भरतालाई तोड्न पनि यहाँको ठूलो भुमिका रहेकै हो।
पार्टीभित्रको विवाद देखाएर देशको सर्वोच्च एवं सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको दुई-दुई पटक विघटन गरेको ऐतिहासिक कदमको निश्चित रुपले इतिहासले समीक्षा गर्ला। पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाल्न नसकेको र यहाँकै कार्यकालमा नेकपा एमाले छिन्नभिन्न भएको घटना ताजै छ। राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थालाई पार्टी र आफ्नो अनुकूल बनाउन पटक-पटक कोसिस गरेको सम्बन्धमा पनि तपाइँ विरोधीहरुको तारो बन्नुभयो।
यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अब नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै गर्दा विगतका सबै कमिकमजोरीलाई त्यागेर स्पस्ट राष्ट्रिय अडान र देशको समृद्धिलाई सर्वोपरि ठानेर पार्टीको गुटगत राजनीतिबाट माथी उठ्दै आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल देश र जनतामा समर्पित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास बोकेको छु।
संविधानले स्थिर र जवाफदेही सरकार, कल्याणकारी राज्य र लोकहितमा आधारित कार्यपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । अहिले तपाइँको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । एमसीसी लगायत कयौं महत्वपूर्ण विषय संसदमा अड्किएर बसेका छन्, ती विषयको विवेकपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्नेदेखि लोकतान्त्र, राष्ट्रियता, संघीयता र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ पार्ने सम्बन्धमा तपाइँ र तपाइँको दलको अर्थपूर्ण एवं सशक्त भूमिका रहोस् । अहिलेको देशको आवश्यकतालाई बुझेर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयमा पनि तपाइँको ध्यान केन्द्रित रहोस्। फेरि पनि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना।
अमर पाण्डे, बुटवल
एमसीसी सम्झौता किन असंवैधानिक छ ?
सरकार ! जनता मारेर मस्ती गर्न पाइन्छ ?
ऊर्जामन्त्री भुसाललाई भण्डारीकाे खुल्लापत्र : फरक काम गरेर देखाउनुस्